ဘက္ထရီ ကုမၸဏီႀကီး CATL က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အသား တင္ အျမတ္ ေငြ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ အထိ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း - Pandaily
Jan 28, 2022, 12:23ညနေ 2022/01/28 14:11:10 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်စွမ်းဆောင်ရည် ခန့်မှန်းချက်ကြာသပတေးနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ များ၏ ရှယ်ယာရှင် များ မှရရှိသော စုစုပေါင်း အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၁၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂. ၂ ဘီလီယံ) မှ ၁၆. ၅ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂. ၅၉ ဘီလီယံ) အကြား ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၅၀. ၇၅% မှ ၁၉၅. ၅၂% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် CATL သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၆. ၂ ၄၉ ဘီလီယံမှ ၈. ၇ ၄၉ ဘီလီယံ သို့ကျဆင်း လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ၎င်း သည်ယခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် တွင်စုစုပေါင်း အမြတ် ငွေ ၇. ၇ ၅၁ ဘီလီယံ နှင့်ညီမျှသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များနှင့် ဘက်ထရီ စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု နယ်ပယ်များတွင် စျေးကွက် ထိုးဖောက် မှု မြင့်တက်လာ ခြင်းကြောင့် ဘက်ထရီ ရောင်းအား တိုးတက်လာ လိမ့်မည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် စျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုတွင် တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စွမ်းရည် အသစ်များ ထွက်ပေါ်လာ ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းအား တိုးတက် မှုကိုတိုးမြှင့် စေခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ် ထိန်းချုပ်မှုကို အားဖြည့် ခြင်းသည် ၀ င်ငွေနှင့် ကုန်ကျစရိတ် အချိုး ကိုလျော့နည်းစေသည်။
ရောင်းအား နှင့် ပတ်သက်၍ CATL ၏ ယခင် တုန့်ပြန် ချက် စာရွက်စာတမ်းများ တွင်ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏စွမ်းအင် ဘက်ထရီ နှင့်စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းအား သည် ၁၀၃. ၅၄ GWh နှင့် ၇၃. ၄၃ GWh အသီးသီးရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ကဏ္ in တွင်တပ်ဆင် ထားသော စွမ်းရည် များ ထပ်မံ တိုးတက်ခဲ့သည်။ CATL ၏အဆိုအရ ၎င်း ၏စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု စနစ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၁၇ GWh သို့ ၇ ဆ တိုးလာ လိမ့်မည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု စနစ်သည် 8GWh ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက် အနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် CATL ပါဝါ ဘက်ထရီ စနစ် များ၊ လီ သီ ယမ် ဘက်ထရီ ပစ္စည်းများ နှင့်စွမ်းအင် သိုလှောင် မှုစနစ် များမှ စုစုပေါင်း အမြတ်အစွန်း သည် ၂၃% ၊ ၂၁. ၁၅% နှင့် ၃၆. ၆% အသီးသီးရှိသည်။ ထို့အပြင် စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု စနစ်သည် လည်ပတ် မှုမှ ၀ င်ငွေ ယွမ် ၄. ၆ ၉၃ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၇ ၂၇. ၃၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤ တိုးတက်မှု သည်အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှစ်ခု ထက်များစွာ သာလွန် သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ CATL သည် လျှပ်စစ် Ca ဘက်ထရီ လဲလှယ် ရေး ဝန်ဆောင်မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်RS
ကုမ္ပဏီ ကပြောကြား ခဲ့သည်မှာ “စျေးကွက် ၏ စွမ်းရည် လိုအပ် ချက်အရ လာမည့် နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း စွမ်းအင် နှင့်စွမ်းအင် သိုလှောင်ရေး ဘက်ထရီ များ ၀ ယ်လိုအား သိသိသာသာ ဆက်လက် မြင့်တက် မည်ဟုမျှော်လင့် ရပြီး ကုမ္ပဏီ၏ စျေးကွက် ဝေစု မှာလည်း ထပ်မံ တိုးပွားလာ လိမ့်မည်” CATL သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဘက်ထရီ စွမ်းရည်သည် ၆ ၇၀ GWh ထက်ကျော်လွန် မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင် မှု စွမ်းရည် များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်အထိ CATL တွင် R & D ပညာရှင် ၇၈ ၇၈ ဦး ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ကုမ္ပဏီနှင့် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများသည် ပြည်တွင်း မူပိုင်ခွင့် ၃၃ ၅၇ ခု၊ ပြည်ပ မူပိုင်ခွင့် ၄ ၉၃ ခုနှင့် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ မူပိုင်ခွင့် ၃၃ ၇၉ ခု တို့ကို လျှောက် ထားသည်။
ထို့အပြင် CATL သည်တရုတ် သိပ္ပံ အကယ်ဒမီ ရူပဗေဒ ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင် ပူးတွဲ ဓာတ်ခွဲခန်း တစ်ခု ကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင် ကဏ္ innovative တွင် ဆန်းသစ် သော စက်မှုလုပ်ငန်း-တက္ကသိုလ်-သုတေသန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပလက်ဖောင်း တစ်ခု တည်ထောင် ရန်စီစဉ်ထားသည်။